Korea Atsimo: Lehiben'ny Polisy Teo Aloha Nogadraina Fa Nanala-Baraka Ny Filoha Efa Nodimandry	Voadika ny 23 Febroary 2013 13:34 GMT
Zarao: Nahazo sazy an-tranomaizina 10 volana ilay lehiben'ny polisy Koreana Tatsimo teo aloha noho ny fiampangana lainga nataony tamin'ilay filoha teo aloha efa any amin'ny varo-tsy-mifody izay nolazainy fa manana kaonty miafina amin'ny banky amin'ny anarana sandoka. Tamim-pifaliana no nandraisana ny didy navoakan'ny fitsarana, saingy nitaraina ny sasany tamin'ireo mpisera aterineto fa tara loatra vao noraisina ny fanapaha-kevitra, efa marobe anefa ireo ratsy vitany.
Mangidy hoditra eo amin'ny liberaly sy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona i Cho Hyun-oh noho ny fanaraha-maso ataony amin'ireo olo-tsotra sy ireo tsikera [ko] ary koa noho ny famoretana feno herisetra [ko] notarihany manoloana ireo fihetsiketsehana izay namoizana ain'olona ampolony. Ao amin'izay inoana fa misy resaka ara-politika no nahatonga ny fitoriana ny filoha mamim-bahoaka teo aloha Roh Moo-hyun ho manao kolikoly, nilazan'i Roh fa manana kaonty miafina any amin'ny banky i Cho kanahatonga an'i Roh namono tena [ko]. Nilaza i Cho fa tamin'ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana no nahazoany vaovao momba ilay kaonty miafina, fanambarana izay vitany ny nanamarina izany hatramin'izao arysokajian'ny maro ho toe-draharaha tsy misy fototra [ko]. Nomelohin'ny Fitsarana ao amin'ny Distrika Afovoany ao Seoul i Cho fa manala baraka ny filoha teo aloha izay efa namoy ny ainy ary nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy tamin'ny 20 Febroary 2013 .